गगन थापालार्इ विदेशबाट एक नेपालीको पत्र ~ FMS News Info
गगन थापालार्इ विदेशबाट एक नेपालीको पत्र
गगन थापा ज्यू,
मलाई तापार्इ नेताहरु मध्ये एकदमै मन मर्ने नेता हुनुहुन्छ । तपार्यको राजनीतिक लोकप्रियता र पछिल्लो समयमा तपाईले देखाउनु भएको जनभावनाले हामी सबैको तपाईप्रति आस्था हुनु स्वभाविक हो । हामी सम्पुर्ण नेपालिको आशाको केन्द्र र प्रभावशाली नेताको रुपमा हामीले तपाईलाई लिएका थियौँ । तर तपाई समाजमा अराजकता फैलाउने डन, गुण्डागर्दी गरि नेपाली जनतालाई दुःख दिदै हिड्नेको बिरोध गर्नुको साटो समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईप्रतिको हाम्रो विवास र आस्थालार्य तपाई किन पानीमा मिसाउँदै हुनुहुन्छ ?
यदी तपाई गुण्डाको पक्ष लिएर हिड्दै हुनुहुन्छ र यो साचो हो भने नेता ज्यू कुनै नेपालीले पनि तपाईलाई माफ गर्ने छैनन् । घैंटे भन्ने डनको नेपाली समाजमा कुन स्थान थियो त्यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर, तपाईले उसको समर्थन गर्दै गुण्डावादलाई बढावा दिने काम गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको थिएन । यो खबर सुन्दा मेरो मन निकै दुखेर आयो ।
नेता ज्यू, यस्ता समाजमा अराजकता फैलाउने डनको पछि लाग्न छोड्दिनुस । नेपाल र नेपालीको हित हुने काम तिर लाग्नुस् । सम्पुर्ण नेताहरुलार्इ जनताले बिश्वास गर्न छाडी सके तर तपाईबाट हामीले धेरै आशा गरेका थियौँ । यदी जनाताको नेता तपाई हो भने यी डनको पछि न लाग्नुस नेता ज्यू मेरो तपाईलाई आग्रह छ ।
हुन त म न नेता न कोही । न मेरो उच्च तहसम्म पहुँच तपाईलाई यसरी खुलापत्र लेखेको मन पर्ला या नपर्ला तर म एउटा आम नेपाली हुँ । मलाई यो देशको चिन्ता छ । यो विदेशको भूमिमा आएर तपाई जस्तो होनहार नेताले गुण्डाको साथ दिदैछ भनेको सुन्दा निकै चित्त दुख्यो । संसार भरीबाट नेपाल प्रहरीलाई समर्थन आइरहेको बेला तपाई किन बीचमा आउदै हुनुहुन्छ ? बिरोध गर्दैहुनुहुन्छ । तपाई जस्तो नेताले त झनै जनताका लागि, जनतााके शान्ति, सुरक्षा आदीका लागि गुण्डावादको अन्त्यका लागि पहल गर्नूपर्ने होइन र ? गुण्डागर्दी, अराजकता, हत्या, हिंसाकै कारण हामी नेपाली यसरी विदेशीनु परेको छ । जबसम्म यो सबैको अन्त्य हुँदैन तबसम्म देशको विकास सम्भव छैन ।
के तपाई राष्ट्र सेवाको बाहानामा राष्ट्रलाई लुट्न सभासद हुनु भएको हो र ? सम्पुर्ण नेपालीको प्रश्न तपाईलाई ? हामी जनताको अविश्वासको पात्र न बनी दिनु होला प्लिज ।
गोपाल पहाडी, हाल मलेसिया भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस